Salman Khan: Waxaan la yaabanahay sababtii iskuulka la iiga eryay - BBC News Somali
Salman Khan: Waxaan la yaabanahay sababtii iskuulka la iiga eryay
Jilaaga caanka ah ee shirkadda filimada Bollywood-ka Hindiya, Salman Khan ayaa qirtay inuu "ku madax adkaa" waalidiintiisa, Salim Khan iyo Salma Khan, sidoo kalena iskuulka uu dhiganayay laga eryay isagoo marayay fasalka afaraad.
Xiddigan ayaa arrimahan sheegay xilli uu ka hadlayay bandhigga "Tara Sharma", halkaasoo uu ka ahaa marti sharafkii ugu horreeyay.
Warbaahinta dalka Hindiya ayaa si weyn u hadal heysa sheekadan ku saabsan noloshii yaraanta ee Salman.
Markii ay Tara weydiisay Salman su'aal ku saabsaneyd sidii uu yaraantiisa ahaa ayuu yiri: "Markaan yaraa, waan dhibi jiray waalidiinteyda, aad bay iigu rafaadi jireen, walina sidii ayaan ahay, ilaa hadda dabeecaddaas waan leeyahay".
Wuxuu isagoo hadalkiisa sii wata sheegay inuu mar walba jeclaa waalidiintiisa, ayna aad isugu dhawaayeen. "Taasi waa sababta aan xanuunka u dareemo mar kasta oo aan xaaladdaas soo xasuusto", ayuu yiri.
'Waan la yaabanahay wixii aan sameeyay ee iskuulka la iiga eryay'
Xigashada Sawirka, Hindustan Times / AFP
Maxkamad dambi ku heshay Salman Khan
Salman Khan ayaa dhanka kale ka hadlay qaar ka mid ah marxaladihii uu soo maray markii uu iskuulka dhiganayay, isagoo sheegay in "la eryay" xilli uu ku jiray fasalka 4-aad ee dugsiga hoose.
"Run ahaantii ma aqaanno waxa khaldan ee aan sameeyay marka aan soo korayay, waana la yaabanahay sababtii la iiga eryay iskuulka anigoo fasalka afaraad ku jira. Waxaa la ii gudbiyay iskuul kale, markaas ka dibna waxay iskuulkeygii hore ka codsadeen inuu dib ii qaato", ayuu yiri Khan.
Atoorahan ayaa intii uu sheekadaas waday wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday dhacdo dhex martay macallinka maamulaha ka ahaa mac-had uu dhiganayay. Wuxuu sheegay in maamulaha uu carooday markii uu Salman u gambiyay cashirkii maaddada seyniska. "Bannaanka ayuu igu sugayay isagoo ul heysta, wuxuuna iisii istaagay albaabka weyn agtiisa! Wuu ogaa inaan wax kale ku mashquulsanaa", ayuu yiri.
Maxaad kala socotaa dhaqdhaqaaqyada dhinaca filimada ee Salman Khan?
Filimkii ugu dambeeyay ee uu soo saaray Salman Khan, oo lagu magacaabo Dabangg 3 ayaa dhowr maalmood gudahood kusoo xareeyay dhaqaale aad u farabadan.
Iyadoo 4 maalmood kaliya laga joogo markii uu soo baxay filimkan, wuxuu guulo weyn kasoo hoyiyay gudaha Hindiya, mana aysan hoos u dhigin mudaharaadyada sharciga dhalashada looga soo hoirjeedo ee ka socda waddankaas. Dibadbaxyadaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxyeello ballaaran gaarsiiyay ganacsiga guud ahaan Hindiya.
Dabangg 3, oo uu hagay Prabhudeva, waxaa sidoo kale jilliinkiisa ka qeyb qaatay atariishada Sonakshi Sinha iyo Saiee Manjrekar, oo filimada ku cusub.
Salman ayaa sidoo kale lagu arkay barnaamijka bandhigga runta ah ee Bigg Boss 13.
Bigg Boss ka dib Salman wuxuu billaabi doonaa jilista filimka lagu magacaabay Prabhudeva's Radhe. Waxaa la filayaa inuu filimkaas soo baxo sanadka 2020-ka gudihiisa.